बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: 2014-11-23
कोरियाली साहित्यकारको जीवन कथा
प्राध्यापक डाक्टर युजङ्गयी कोरियाली बालसाहित्यकार हुन् । उनी हङ्गीक विश्वविद्यालयमा कोरियन साहित्य पढाउँछिन् । उनले आधुनिक कोरियाली कविता भन्ने विषयमा विद्यावारिधी गरेकी छिन् ।
चालीस दिने नेपाल भ्रमणका लागि जङ्गयी नेपाल आएकी थिइन् । त्यो भ्रमणमा उनीसँगै १३ जना कोरियाली बालबालिकाहरु पनि आएका थिए ।
यस अंकमा हामीले प्रसिद्व कोरियाली कवि, समालोचक र बालसाहित्यकार जङ्गयीसँग उनको जीवनका कथाव्यथावारे कुराकानी गरेका छौं । उनी आफ्नो जीवनकथा सुनाउँदै भन्छिन्
म एउटा साधारण परिवारमा जन्मिएकी हुँ । मेरो बुवा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । मेरो घरमा हामीलाई खान, बस्न र पढ्न पनि गाह्रो अवस्था थियो ।
म सानै देखि पुस्तक पढ्न खूब रुचि राख्थें । म सानो छँदा विदेशी लेखकका किताबहरु बेच्दै घर–घरमा हकरहरु घुम्दथे । उनीहरु थरीथरीका किताबहरु बेच्दै हिड्थे । एक सेट किताबमा दशथरी कथाका किताबहरु हुन्थे । ती किताब पढ्न मलाई एकदमै मन लाग्थ्यो । तर मेरो बुवाआमाले किन्दिन सक्नु हुन्नथ्यो । मसँगै भाइबहिनीलाई पनि पढाउँनु पर्ने भएकोले घरको सबै पैसा हाम्रो विद्यालयको किताब किन्दा नै सकिन्थ्यो । त्यसैले म सँधै घर बाहिर उभिएर ती घुमाउँदै किताब बेच्न हिडेका हकरहरुले बोकेका कथाका किताबहरु लोभिदै हेर्थें । म पढ्न नपाएकोमा थकथक मान्थें ।
एकदिनको कुरा हो, मैले मेरो छिमेकीको घरमा थुप्रै कथाका किताबहरु दराजमा सजाएर राखेको देखें । त्यसपछि म दङ्ग पर्दै छिमेकीको घरमा गएर किताब पढ्ने कुरा सोच्न थालें । नभन्दै मैले त्यो मौका पाएँ । एक दुई दिन मैले त्यो छिमेकीको घरमा गएर ती किताबहरु मज्जाले पढें । शुरुको दिन त म किताब पढ्न पाएकोमा यति धेरै रमाएँ कि मैले त धेरै खुसी भएर रुँदै–रुँदै किताबहरु पढें । म आफ्नो जिन्दगीमा त्यो दिनलाई कहिले बिर्सिन सक्दिन ।
हुन त मेरा छिमेकीका पनि छोराछोरीहरु थिए । तर उनीहरु घरमा भएको त्यति राम्रा किताबको वास्ता गर्दैनथे । उनीहरुलाई त कथाको किताब पढ्न मन नै लाग्दोरहेनछ । त्यतिबेला म सोच्थें कस्तो बोर जसलाई किताब पढ्न मन छैन ऊसँग चै यति धेरै किताब । मलाई पढ्न मनलाग्छ तर मसँग किताब नै छैन । यो सम्झदाँ मलाई रुन मन लाग्थ्यो ।
यसरी मैले रमाउँदै दुईतीन दिन छिमेकीकोमा गएर किताब पढें । तर त्यसपछि मैले त्यहाँ गएर किताब पढेको उनीहरुले मनपराउँन छाडे । त्यसपछि म त्यो छिमेकीकोमा किताब पढ्न जान छाडें । आमालाई कर गरेर छिमेकीको घरमा किताब लिन पठाउँन थालें । यसरी दुई दिनसम्म आमाले मलाई त्यहाँबाट किताब ल्याइदिनु भयो । तर एकदिन आमालाई पनि वचन लगाएछन् । त्यसपछि आमाले रिसाउँदै ती छिमेकीको सेखी झार्न मलाई एक सेट दशवटा कथाका किताबहरु ल्याइदिनु भयो । ओहो, त्यो दिन त म धेरै खुसी भएकी थिएँ । आफ्नो कथाका किताबलाई किस गरेर, अंगालो मारेर मैले रमाइ–रमाइ पढें । हो, मैले मेरो आफ्नो किताब आफैले रुँदै, कराउँदै, हाँस्दै र हल्ला गर्दै पढेको त्यो दिन मेरो जिन्दगीको कहिल्यै नबिर्सने दिन हो ।
हो, म किताबको कीरा नै थिएँ । म निक्कै धेरै किताब पढ्थें । म किताब पढ्दापढ्दै खाना खान नै बिर्सिन्थें । आमाले मलाई छोरी तिमीले खाना खाएकी छैनौ भनेर दुई तीन पटक सम्झाउँनु पर्दथ्यो ।
यसरी धेरै किताब पढ्ने बानीले गर्दा होला अहिले म लेखक बन्न सकें । अहिले पनि म धेरै किताब पढ्ने गर्छु । मैले क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पनि धेरै किताब पढ्नुपर्छ । त्यो बाहेक मलाई नयाँ–नयाँ उपन्यास, कथा र कविताहरु लेख्न पनि त मैले धेरै किताब पढ्नुपर्छ नि ! मेरा बालसाहित्यमा दशवटा किताबहरु छापिएका छन् । ती सबै किताबले पुरस्कारहरु पनि जितेका छन् । यो पनि म धेरै पढ्ने मान्छे लेखक भएर हो भन्नुहुन्छ मेरा गुरुहरु ।
म समालोचक पनि हुँ । मेरा समालोचनासम्वन्धी पाँचवटा किताबहरु छापिएका छन् । अरुका किताबहरु पढेर ती किताबको राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षका वारेमा लेख्नु मेरो काम हो । त्यही कामलाई समालोचना भनिन्छ । त्यसैले समालोचना गर्न पनि म धेरै किताबहरु पढ्ने गर्छु ।
यसरी आफूलाई सफल मान्छे बनाउँन म धेरै थरी किताबहरु पढिरहेकी छु । मलाई लाग्छ, हरेक मान्छेले किताब पढ्नुपर्छ । राम्रा ज्ञानगुनका किताब पढ्ने मान्छेहरु जीवनमा सँधै सुखी र सफल हुन सक्छन् ।
on November 27, 2014 No comments:
नया नेपालको बालसाहित्य
त्यति बेला काठमाडौंमा डेनिस राइटर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सेली आफ्ना अन्य दुई सहकर्मी साथीहरुको
साथमा नेपाली बालसाहित्यकारहरुसगको छलफलमा व्यस्त थिए । नेपाल बालसाहित्य समाजको निमन्त्रणामा आएका उनी कसरी बालसाहित्यको क्षेत्रमा जानकारीमूलक पुस्तक लेख्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन प्रयासरत थिए ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको हलमा सहकर्मी इंगरको साथमा ‘फ्याक्ट बुक्स फर चिल्ड्रेन’ विषयक छलफलमा सेली पनि उपस्थित थिए ।
छलफल गोष्ठी सामान्य ढंगले चलिरहेको थियो । तर सहभागी एकजना मित्रको एउटा प्रश्नले हलचल पैदा गर्यो । प्रश्न थियो– नेपाली बालसाहित्यले अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको खिल्ली उडाइरहेको छ, यो पक्ष अब सुध्रिनु पर्छ कि पर्दैन ? किन साहित्यमा तल्लो जात नोकर भएको, अपाङ्ग अपहेलित भएको देखाउने ? फेरि हाम्रा कथामा प्रयोग हुने यस्ता वर्गलाई होच्याउने खालका उखान टुक्का राख्न पनि तुरुन्त बन्द गरिनु पर्छ कि पर्दैन ? आदि इत्यादि ।
वास्तवमा नया“ नेपालमा कस्तो बालसाहित्य लेखिनुपर्छ भनेर सोचविचार गरिरहेको म जस्तो बालसाहित्यको विद्यार्थीको मनमा यो प्रश्नले निकै उद्वेलित गरायो । म सोच्न बाध्य भए“ । अब नया नेपालमा बालसाहित्य कसरी लेखिनुपर्छ त ?
प्रश्न आफैंमा गम्भीर छ । यसको उत्तर पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सहज छैन । तथापि अब हाम्रो लेखनमा विचारले भने ठूलो फड्को मार्न सक्नुपर्छ । हामीले श्रम र पसिनालाई पूजा गरेर बालसाहित्य लेख्नुपर्छ । काम गर्ने ठूलो, बसी बसी खाने सानो र लाछी हो भन्ने सन्देश अब हामीले नया“ ढंगले दिनुपर्छ । किनकि हाम्रा उखानहरु पुराना विचारका जर्जर आस्थाहरु हुन् । तिनमा दलित, उत्पीडित वर्गलाई सधैं होच्याइने (डोमिनेटिङ) पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मधेसका मधेसी दाजूभाइलाई मदिसे भनेर चोर्ने र फट्याइ“ गर्ने रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दलित दाजुभाइलाई अपहेलित र दास पात्रकाृ रुपमा चित्रित गरिएको छ । त्यसैले अब लेखिने बालसाहित्यमा जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका आधारमा कुनै पनि पात्रलाई अवहेलित गरी प्रस्तुत गरिनु हु“दैन । उनीहरुलाई उनीहरुको स्थान विशेषको चरित्रका आधारमा उनीहरुको प्रेरणादायी चरित्रको पक्षलाई जनसमक्ष ल्याइनुपर्दछ ।
यस सम्बन्धमा मेरो एउटा तीतो अनुभव छ । मेरो साथी व्रम्हनारायण साहको ९ वर्षको छोरोले मलाई अस्ति उनको घरमा जा“दा प्रश्न गर्यो । अंकल हामीलाई किन मदिसे भनेको ? मैले त्यो बालकको अवोध मुहारमा हेरें । ऊ एकजना वरिष्ठ बालसाहित्यकारको कथाकृति पढिरहेको थियो । सो पुस्तकको एउटा कथामा मदिसेले बच्चा चोरेर लैजान्छ भन्ने प्रसंग रहेछ ।
त्यति बेला मैले त्यो अवोध बालकलाई केही जवाफ दिन सकिन“ । तर मनमनै सोचे काठमाडौंको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने मधेसको बच्चोलाई साथीहरुले किन मदिसे भन्छन् ? म पनि मधेसकै हु । यदाकदा काठमाडौंवादको शिकार म पनि भएको छु । तर मलाई आफ्नो भन्दा त्यो बालकको पीडा गहिरो लाग्यो । मैले उसलाई दिने उत्तर पाइन । तर मैले उसको यो प्रश्नबाट एउटा पाठ भने अवश्य सिकें । आज मधेसी र पहाडी बीचको आपसी द्वन्दको आन्दोलनलाई यो परिस्थितिमा पुर्याउन हामी साहित्यकारहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेछौं नेताहरु जत्तिकै । हामी भित्र रहेको संकुचित धारणा र दास मनोवृत्तिका कारणले गर्दा हामीले यी अल्पसंख्यकहरुको मानमर्दन गर्दै थुप्रै लेखेछौं । हामीले यति लेखेछौं कि हाम्रो नया“ पीढि पनि त्यसैमा अभ्यस्त हुन थालेछ । फलस्वरुप आज एकातिर पुरानै दास मनोवृत्तिको पीढि हुर्किएछ र अर्कोतिर आफूलाई अपहेलित महसुस गर्ने मेरो साथीको जस्तै परिवेशका छोराहरु ठूला भएछन् । तिनको पीडा अहिले विद्रोेहको रुपमा सडकमा निस्किरहेको छ ।
त्यसैले अब हामी साहित्यकारले नया“ सोचमा लेख्न थाल्नुपर्छ । हामी आफ्नो लेखनमा समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने नाममा मधेस र पहाडलाई अवहेलित गर्छौ । दलित र गरिबको मानमर्दन गर्छौ । अब त्यो प्रथा रोकिनुपर्छ किनकि साहित्यले समाजको सिर्जनात्मक प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ, विध्वंसात्मक परिस्थितिको बीजारोपण गर्ने होइन । तसर्थ अब लेखिने बालसाहित्यमा मान्छे मान्छे बीच विभाजनका रेखाहरु कोरिनुहुन्न । एउटा फराकिलो क्षितिज निर्माण गरिनुपर्छ । श्रम गर्ने र पसिना बगाउने एवं आफ्नो कर्मप्रति लगनशील मान्छे नै सर्वश्रेष्ठ मान्छे हो भन्ने निचोड दिनुपर्छ, जाली, फटाहा र वुद्धिको दुरुपयोग गरेर फाइदा लुट्नेको वाहवाही गरिनुहुन्न । कालो, सेतो, रातो, खैरो मान्छे जे जस्तो रंगरुपको भए पनि, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जो जता रहे पनि यी सबै नेपालीको देश नेपाल हो । यी सबै क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय र परिवेशका मानिसहरु मात्र नेपाली हुन् भन्ने भावना हाम्रा बालबालिका लाई हामीले दिन सक्नुपर्छ । नया नेपालको निर्माणमा हामी बालसाहित्यकारहरुका लागि यो एउटा चुनौतीपूर्ण दायित्व हो । यसलाई हामीले पूरा गर्नैपर्छ । अनि मात्र हामीले नया“ नेपाल निर्माणका लागि योगदान दिएको ठहरिनेछ । यस तर्फ आजैबाट हाम्रा लेखकहरु सजग रहनु नै नया नेपाल प्रति बफादार भएको मानिनेछ । यिनै बफादार लेखकबाट नै नया नेपालको निर्माणका लागि नया युगको बालसाहित्य लेखिनेछन् ।
बालसाहित्य लेखनका विषयमा भन्नै पर्ने कुराहरु
बालबालिकाका लागि साहित्य लेख्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा वि. सं. २०५२ तिर फर्कने गर्छु । जतिबेला म एउटा विद्यार्थी शिक्षक थिएँ । अर्थात् बिहान पढ्थें र दिउँसो पढाउने गर्थें । त्यति बेलाबाट नै बालसाहित्य लेखनको यात्रा शुरु भयो । म सम्झन्छु त्यतिबेला मैले एकदमै रुचाएर पढ्ने बालसाहित्य । लोक र दन्त्यकथाको सरल रुपान्तरण । यस क्षेत्रका लेखक पनि मञ्चमा परिचयक्रममा बालसाहित्यकार भन्दा त्यति खुसी हुँदैनथे । आफूलाई अरु विधाको लेखक भनाउन रुचाउँथे । उहाँ बालसाहित्य लेखक भने मानौं तल्लो दर्जाको लेखकको स्थान थियो त्यतिबेला । प्राय लेखक बयस्कका लागि लेखेर स्थापित नाम थिए । उनीहरु आग्रहमा लेख्थे, पूर्वाग्रहमा लेख्थे । यसरी त्यो बेला बालसाहित्य हुर्कदै थियो । यही मेसोमा वि. सं. २०५५ मा बालक पत्रिका सम्पादन गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि बालसाहित्यको खेती गर्ने काममा सक्रिय हुन पुगें । सम्झन्छु, त्यतिबेला बालसाहित्य लेखकसँगको साक्षात्कार, लेखन उपदेशबाट निर्देशित हुनैपर्छ र यसले नैतिकताको पाठ पढाउनै पर्छ भन्ने मान्यताको पर्खाल ।
तर समय बलवान् हुँदोरहेछ । वि. सं. २०५६ मा धुलिखेलमा भएको बालसाहित्य लेखकको कार्यशालामा सहभागी भएपछि लेखनले कोल्टे फे¥यो । तर पनि बालसाहित्य लेखनमा एउटा ठूलो जमात लोककथाको सरल भाषिक रुपान्तरणमा अलमलिन छाडेन । यसरी बालसाहित्य कस्तो हुनुपर्छ र अब कस्तो लेखिनुपर्छ भन्ने बहस र सेमिनारहरु केही भए, तर पर्याप्त भएनन् ।
आज बालसाहित्यको ठूलो ग्लामर छ । यस क्षेत्रका लेखकहरु मञ्चमा सजिन थालेका छन् । एउटा सुखद दिन आएको छ यतिबेला । तर बदलिंदो युग अनुकुलको बालसाहित्य लेखनको चुनौती हाम्रा सामु उभिएको छ । एकातिर मनोरञ्जनका सामग्रीहरुको बढ्दो पहुँच र अर्कोतिर समयानुकुल बालरुचिलाई संवोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता । तथापि नेपाली बालसाहित्यको चौतारीमा केही सुखद कामहरु भइरहेका छन्, अनलाइनमा बालसाहित्यको हुँदै गएको व्यापकता, विषयगत विविधतामा फैलिदै गरेको अवस्था, प्रकाशनमा रङ्गीन साजसज्जा र भाषागत पक्षमा बढ्दै गएको सचेतता, यसका सुन्दर साक्षी हुन् ।
वास्तवमा नेपाली बालसाहित्यको प्रवर्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रुम टु रीड को योगदान सह्रानीय छ । यसले नेपाली बालसाहित्य लेखकको किताब गाउँगाउँमा पु¥याएको मात्र छैन । स्तरीय लेखन, साजसज्जा र प्रकाशनमासमेत वलियो मापदण्ड विकसित गर्दै लगेको छ । यहीं क्षेत्रमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रीड नेपालले गरेको योगदान पनि सह्रानीय रहेको छ ।
यसरी आज बालसाहित्य लेखन एउटा चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । वर्षेनी पन्द्र वा बीसवटा किताब निस्किने हिजोको अवस्था आज सरदर २ सय ५० वटाको हाराहारीमा पुगेको छ । पूरापूरा झकिझकाउ छ नेपाली बालसाहित्यको अवस्था । अब परिवर्तित युगलाई वैचारिक धरातलमा पृष्ठपोषण गर्ने बालसाहित्यको खाँचो छ, जुन सहअस्तित्वको भावना, भाइचाराको सम्बन्धले लेपिएको हुनुपर्नेछ । हो, आज जसरी बालसाहित्य दश बिस फाइदा घाटाको मात्र तराजुमा जोखिएर लेखिदै छ, यो जोखिमपूर्ण कदम हो । हामी एउटा असल र जिम्मेवार नागरिक उत्पादनको अभियानमा छौं ।
आजको बालक असल बालसाहित्य पढेर मात्र भोलिको जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्छ । त्यसैले बालसाहित्य लेखन एउटा गम्भीर लेखन हो । जसरी एउटा सानो बालकलाई लिटो तयार गर्न आमाले भरपूर मिहिनेत गर्छिन्, उनले त्यही अनुसारको सिप आर्जन गरेकी हुन्छिन्, त्यसरी नै एउटा बालकका लागि लेख्ने लेखककले रचना तयार गर्न विशेष मिहिनेत गर्नै पर्छ ।
एउटा बालक, आजको आशा हो । ऊ अगुवा पनि हो । त्यसैले उसको लागि तयार गरिने साहित्यिक सामग्रीले विशेष महत्व राख्दछ । किनकि एउटा मानिस मष्तिष्कबाट संचालित हुन्छ । साहित्यले उसको मष्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने काम गर्दछ ।
जब हामी बालसाहित्य लेखनको कुरा गर्छौं त्यो सँगै बालबालिकाको व्यवहार निर्माण, सामाजिकता र भाषाको सिकाइको पक्ष पनि गाँसिएर आउँछ । त्यसैले एउटा असल बालसाहित्यले सौहार्दपूर्ण बालकको निर्माणमा सहयोग गर्दछ र उसलाई भाषिक रुपमा दक्ष पनि बनाउछ । त्यसरी नै एउटा अपरिपक्व बालसाहित्यले बच्चाको भाषिक सिकाइलाई मात्र भ्रष्ट पार्दैन उसको व्यवहारिक र नैतिक पक्षमा पनि घात गर्दछ । त्यसैले बालसाहित्य लेखन अत्यन्त गम्भीर लेखन हो भनिएको हो ।
वास्तवमा बालकका लागि लेखिने साहित्य उनीहरुको उमेर समूह, समाज र पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि जस्ता पक्षबाट सिधै प्रभावित हुन्छन् । उमेर समूह अन्तर्गत् रंगको संयोजन, भाषाको प्रयोगको अवस्था र कुन परिवेशको बच्चालाई के कुरा, कस्तो कुरा पढ्न दिदा वा पढेर सुनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा बालसाहित्य लेखक सदैव सचेत हुनु जरुरी छ । जसका लागि उमेर समूह अनुसारका बालबालिकाको रुचि, मनोविज्ञान र भाषिक स्तरका वारेमा एउटा लेखकले पर्याप्त ज्ञान हासिल गरेको हनुपर्दछ । यस आलेखमा यिनै पक्षमा केन्द्रित भई केही छलफल र वैचारिक मन्थन गर्ने काम गरिएको छ । साथै अनुसन्धानबाट प्राप्त केही तथ्यहरुको जगमा उभिएर विमर्श पनि गरिएको छ ।
एउटा बालक जो ६ वर्षको छ । सामान्य अवस्थामा निश्चय नै उसले स्वाद लिई–लिई क्रम मिलाएर पढ्ने क्षमता ग्रहण गरिसकेको हुन्छ । उसमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने, हतारिने र घरभन्दा बढी विद्यालयमा रमाउने स्वभाव हुन्छ । यिनीहरु प्रश्न गर्न पाउँदा रमाउँछन् । साथै अरुसँग घुम्न पाउँदा र अरुले खानेकुरा उपहार दिएमा दंग पर्ने स्वभावका हुन्छन् । साथै असफलतामा छिट्टै विचलित भई हाल्ने र रोइ हाल्ने यिनीहरुको स्वभाव हुन्छ । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने यो उमेरका नानीहरु यी पक्षलाई विचार गरी लेखिएको रचना स्वाद लिएर पढ्छन् । जसले गर्दा उनीहरुको भाषिक स्तरमा पनि राम्रो टेवा पुग्दछ र उनीहरुको व्यक्तित्वको विकासमा पनि यसले मद्घत गर्दछ । यस खालको स्वभाव र व्यवहारको अवस्था एउटा बच्चामा ७ र आठ वर्षमा पनि रहिरहन्छ । यसमा उमेरको उकालो लाग्ने चरणसँगै समूहमा मिलेर काम गर्न रुचाउँने, रमाइलो गर्न, पटपट बोल्न, गल्ति सुधार्दै अघि बढ्न र शब्दभण्डार ह्वात्तै बढाउँन सक्नेजस्ता खूबी एंव स्वभावहरु थपिदै जान्छन् । साथै खेलकुदमा रमाउँने, समानता, सबैप्रति समान व्यवहार, भेदभाव मननपराउँने आदि जस्ता स्वभाव पनि रहन्छन् । त्यसैले एउटा लेखकले यो पक्ष पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै जब ऊ ९ वर्षको पुग्छ । ऊ ज्ञान प्रति जिज्ञासु हुन थाल्छ । जानकारीमूलक खेलमा रुचि राख्छ । साथै निष्पक्ष व्यवहार खोज्ने र गुनासो गर्ने बानीको विकास हुन्छ । यस अलावा उसमा कुरालाई बढाइचढाइ गरेर तन्काएर भन्दा रमाइलो मान्ने, ठूलामाथि खोट लगाउँने र घुर्की लगाउँने आदि जस्तो स्वभावको विकास हुन्छ । यस अलावा आफ्नै लिंगको (केटा भए केटासँग र केटी भए केटीसँग) मिलेर राम्रो मित्रता राखेर काम गर्दा दंग पर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि दश वर्षको उमेरमा परिवारका सदस्य र साथीभाइबीच रमाउँने र सही कुरा गर्न मनपराउँने साथै धेरै किसिमका किताब पढ्न रुचि राख्ने र आफ्ना कुरा अरुलाई भन्न रुचि राख्ने एवं हँसिलो भएर प्रस्तुत हुनेखालको हुन्छन् । अरुको कुरा सुन्ने, लगनशीलता र सहयोगी भावनाको विकास पनि यो उमेरका प्रमुख पक्ष हुन् ।
यसरी बढ्दै जब बालक ११ वर्षको हुन्छ तब उसमा तर्क गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ । ऊ फरक फरक कोणबाट समाजलाई हेर्न थाल्छ । आफूमै मग्न भई रमाउँने र निर्णय गर्दा अलमलिने दोधारमा पर्ने, नयाँ नयाँ काम गर्न रुचाउँने स्वभावको हुन्छ । यो उमेरमा उसमा अरुलाई ठाडठाडै भन्ने मुडी स्वभाव पनि रहन्छ । त्यसपछि १२ वर्षमा टेक्दा उसमा प्रौढको जस्तै व्यक्तित्व देखा पर्न थाल्छ । ऊ विवेकी र समझदार बन्छ । अर्काको दुःख मर्म बुझ्ने तथा साथीभाइलाई बढी महत्व दिने स्वभाव विकसित हुन्छ । यही उमेरको क्रममा केटीहरुमा रजस्वला हुने गर्दछ । केटाकेटी दुवै क्रमशः किशोरावस्थातिर लम्कन्छन् ।
साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ चर्चा गरिएको उमेरका विषयमा, यिनको शारिरीक, मनोवैज्ञानिक, भाषिक र सामाजिक विकासका वारेमा एउटा लेखकले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु थुप्रै छन् । यी त झलक मात्र हुन् । तथापि भविष्यमा एउटा असल पाठक र एउटा सफल व्यक्तित्व निर्माण भएको नागरिक तयार गर्नका लागि यी उमेरका वारेका प्रस्तुत गरिएका कुरालाई गमेर लेख्न सक्दा पनि पठनीय र रुचिकर बालसाहित्य तयार हुने धरातल निर्माण हुनसक्ने कुरामा विमति राख्न सकिन्न ।
यस अलावा हामी कहाँ अहिले लेखिदै आएको साहित्य अधिकांशतः यी उमेर समूहका लागि बढी लक्षित पाइएकाले पनि यी उमेर समूहवारे थोरबहुत चर्चा गर्नु यहाँनिर उपर्युक्त हो भन्ने लागेको छ ।
अब यो भन्दा तल्लो उमेर समूह वा प्रारम्भिक तहको बालबालिकाका लागि लेख्न ती बालबालिकाको रुचि र स्वभाववारे केही चर्चा गरौं । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा हालसम्म प्रकाशित बालसाहित्यमध्ये दुई प्रतिशतमात्र यो उमेर समूका लागि लक्षित पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् भन्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । जुन दुःखलाग्दो अवस्था हो । यो उमेर समूहका लागि चर्को रंग रहेका चित्र भएका किताबहरु हुनुहँुदैन, सालिन रंगको हुनुपर्छ । किताबलाई यताउति चलाएर सार्न मिल्ने, किताबको ढोका खोल्न मिल्ने र किताब छुँदा विभिन्न आवाज आउने जस्ता रमाइला प्रकृतिका उनीहरुका दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द थोरै भएका वा शब्द नै नभएका क्रियाकलाप मात्र भएका पनि पुस्तक हुन सक्छन् । जन्मेदेखि २ वर्षसम्मको बच्चालाई पुस्तकप्रति लगाव पैदा गर्न वा किताब छ है भनेर स्मृतिमा राख्ने हेतुले मात्र मोटा गाता भएका यस्ता किताबको तयारी उत्तम मानिन्छ ।
त्यस्तै २ देखि ४ वर्षसम्मको बच्चाको लागि भाषाको सिकाइको सुरुको चरणका वर्णमालाको ज्ञान दिने, लय हालेर गाउदै र भन्दै सुनाउन सकिनेखालका र विपरीतार्थी शब्द एवं ५ शब्दको वाक्य संरचनामा तयार भएका चित्रकथाहरु पनि उनीहरुका लागि रुचिकर हुन्छन् । जसमा उनीहरुलाई नयाँ पात्रको अनौठो दैनिकीवारे हाउभाउसहित प्रस्तुत गरिदा त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै ४ देखि ६ वर्षका नानीको हकमा छोटा, रमाइला र लय मिलेका कथा र कविताका पुस्तक मनपराउँछन् । के कसरी चल्छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा मेटाउने सामग्री तर्फ पनि यिनीहरुको ध्यान बिस्तारै बढ्दै जान्छ । त्यसैले सरल, लयात्मक जानकारी किताबहरु यो उमेरका लागि बढी रुचिकर हुन्छन् भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अब अन्त्यमा अलिकति बालसाहित्य लेखनको वर्तमान अवस्थावारे टिप्पणी गरौं । अहिले हरेक महिना ५ वटाको हाराहारीमा वार्षिक ६० वटा जति बालसाहित्यका किताब छापिइरहेको अवस्था छ । तर ती किताब लेखनको अवस्था निकै अलमलको छ । त्यो यस अर्थमा कि लेखक कुन उमेर समूहका लागि लेखिरहेको छु भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकिरहेको देखिन्न । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अब यहाँनिर यही विषयको सेरोफेरोमा केही चर्चा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।
लेखक साथी, तपाईंले लेख्नुभएको किताब सुरुवात एउटा उमेर समूहको, बीचको अर्को उमेर समूहको र अन्त्य अर्को उमेर समूहको रुचिसँग मिल्दो भइदियो भने के त्यो किताब पठनीय बन्ला त ? त्यो पक्कै पनि बन्दैन । त्यसैले सुरुको चरणमा लेखकले अरु कुनै कुरामा अलमल नगरी यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम आफूले लेख्ने चरणलाई तीन चरणको चश्माबाट हेर्ने, जन्मदेखि ५ वर्ष, ६ देखि ९ वर्ष र १० देखि १३ वर्ष । हाम्रो परिवेशमा यो उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसरी हेरिसकेपछि तपाईंले तयार गर्नुभएको योजनालाई यो आलेखमा रहेका कुराहरुले थोरबहुत सहयोग गर्न सक्छन् । तथापि तपाईंले लेख्ने निर्णय गर्नुभएको उमेर समूहका बालबालिकाको गतिविधिको प्रत्यक्ष अवलोकन, उनीहरुसँग गफ गर्न, खेल्न र समय बिताउन निकाल्ने समय र संसर्गले तपाईंलाई थप धेरै कुराहरुका सम्बन्धमा निर्देशित गर्नेछ । जसले गर्दा तपाईंले उत्कृष्ट बालसाहित्य सिर्जना गर्न सक्नु हुनेछ । जसका लागि तपाईंलाई अग्रिम शुभकामना छ ।